Amin’ny maha tanora maharaka antsika, dia andeha hojerena ny fomba fiakanjony ka mba alaina tahaka ihany koa.
Isan’ny akanjo ankafizin’i Martina ny satroka, lobaka vita amin’ny jean, ny « blazer » ary ny satroka. Ankafiziny manokana ihany koa ny « salopette » ary tsy misalasala izy manao ireny zipo sokajiana ho : « romantique » ireny. Ampiarahiny amin’ny perfecto sy top misarim-boninkazo izany zipo izany. Efa mameno ny fitoeran’akanjony ihany koa ny “croc top”, na irony ambonin’akanjo somary malalaka no sady miantona irony. Aleo ny sary no haneho bebe kokoa ireo fiakanjony ireo.